James Rodriguez oo doortay kooxda uu ku biirayo xagaagan marka uu dhabarka u jeediyo Real…..? – Gool FM
James Rodriguez oo doortay kooxda uu ku biirayo xagaagan marka uu dhabarka u jeediyo Real…..?
Kaafi June 29, 2016
(Madrid) 29 Juunyo 2016. James Rodriguez waxa uu bartilmaameed u yahay Manchester City iyo Chelsea laakiin waa Paris Saint-Germain mida hogaanka u haysa saxiixa kubad abuuraha Real Madrid, sidaas waxaa laga soo xigayaa wararka laga helayo Spain.
Laacibka u dhashay Colombia inta badan waxa uu iska weynayey safka bilowga kulamada ee Zinedine Zidane.
El Confidencial waxa ay dhowaan qortay in Rodriguez oo tintiisa midabka huruudiga biyo biyaha ah mariyey in uu aqbalay aayihiisa Madrid in uu dhamaaday waxa uuna door bidayaa PSG iyada oo uu tababare Unai Emery uu khabiir ku yahay ka caawinta ciyaaryahanada in ay dib u helaan heer ciyaareedkoodii fiicnaa.
Chelsea iyo Manchester City wey cadeyeen xiisaha ay u qabaan James iyaga oo Real Madrid kala hadlay helidiisa.
Hase yeshee, PSG ayaa u yeertay wakiilka Laacibka oo miiska soo saartay dalab aan la diidi karin.
Zidane waxa uu u sheegay Real Madrid in James Rodriguez la iska iibiyo.
Emery waxa uu caan ku yahay dib u soo nooleynta xiddigaha.
Dhowaan waxa uu dib waayihiisa micno ugu yeelay Ever Banega, kaas oo waqtgisii Valencia u muuqday mid mugdi ah waxaana dib amaah loogu celiyey dalkiisii hooyo ee Argentina kahor inta uusan Sevilla iman.
Ma dhahnaa waa maalinta goolhayeyaasha… (David de Gea iyo Petr Čech ayaa..) + Sawirro
"Iscasilaada Messi waa ceeb u soo hoyatay kubadda cagta" - Luis Suarez